सकियाे डिपो र कण्डम, अब के हुन्छ ? - Khabar Break | Khabar Break
सकियाे डिपो र कण्डम, अब के हुन्छ ?
एक महीनाअघि नै डिपो सकिएपछि आफूले नआएसम्मका लागि पसलबाटै खरीद गरेर कण्डम प्रयोग गर्न सल्लाह दिएको स्वास्थ्य चौकी सुखीपुरका प्रमुख भुपेश रतन यादवले बताउनुभयो । डिपो र कण्डम खरीद गरी आपूर्ति गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको र छिट्टै आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता आएको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
नवविवाहिता बाहेकका अधिकांश महिलाले कण्डम र चक्कीको साटो डिपो खोप लगाउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । कण्डम बालबालिकाले भेट्ने, फुक्ने र कण्डम प्रयोग गरेको घरपरिवारका सदस्यले थाहा पाउने भएकाले लोकलाजका कारण महिला र पुरुष कण्डमको साटो डिपोप्रति आकर्षित भएका छन्् ।
राजा फर्काउने जिम्मा युवाहरुमा : मगर
गर्भ किन खेर जान्छ ? यस्ता छन् यसका कारण, लक्षण र बच्ने उपाय
थाहै नभई ग्यास्ट्रीक बिग्रिएर अल्सर हुनसक्छ ! यी हुन् अल्सरका लक्षण
९९ प्रतिशत मानिसले गर्छन् दैनिक यी गल्ती
जान्नुहोस मधुमेह के हो ? कसरी बँच्ने ?